Guddiga la socodka dib u eegista dastuurka oo warbixin siiyay Aqalka Sare | Somali National Television - sntv.so
Home AQALKA SARE Guddiga la socodka dib u eegista dastuurka oo warbixin siiyay Aqalka Sare
Guddiga la socodka dib u eegista dastuurka oo warbixin siiyay Aqalka Sare
Muqdisho(SNTV);- Guddiga Joogtada Golaha Aqalka Sare ayaa Kullan ay maanta ay ku yeesheen xarunta Golaha waxay warbixin kaga dhageysteen Guddiga la socodka Dib u eegista Dastuurka ee Baarlamaanka Federaalka.
Kullanka ayaa waxaa shirguddoominayay Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi C/llaahi,waxaana dhageysiga Warbixinta Guddiga ay ku saabsaneyd dib u eegistii lagu sameeyey 5tii cutub ee ugu horeysa Dastuurka.
Xildhibaan Burhaan Aadan Cumar oo ka mid ah Guddiga la socodka Dib u eegista Dastuurka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa warbaahinta u sharxay waxyaabihii looga hadlay kullanka maanta iyo cutubyada dib u eegista lagu sameeyay.
” Waxaan soo gudbinay shantii cutub ee ugu horeysay ee lagu sameeyay dib u eegista oo shaqo badan runtii laga soo qabtay oo ay ka soo shaqeeyeen Guddiga madaxa bannaan ay qoristeeda soo eegeen Wasaaradda arrimaha dastuurkana ay soo gudbisay qodobadii u baahnaa wada xaajoodkii siyaasadeed ka dibna, Guddiga la socodka loo soo gudbiyay ka dibna, la diyaariyay warbixin ku saabsan arrimaha laga qabtay dib u eegista dastuurka,” ayuu yiri Xildhibaan Burhaam Aadan Cumar.
Ugu danbeyntii,Xildhibaan Burhaan Aadan Cumar ayaa sheegay in tallaabada tan xigta ay tahay in la tago Dowlad Gobolleedyada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka,wuxuuna carabka ku adkeeyay ka hor intaan Gobollada la tagin u yeeri doonaan madasha Guddiyada Dastuurka heer federaal iyo heer Maamul Gobolleed intaba si wada tashi loola sameeyo.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo u gurmatay dadkii ku waxyeeloobay weerarkii argagixisada, kuna baaqday in loo Midoobo ciribtirka Al-Shabaab
Next articleGolaha wasiirada XFS oo ansixiyay Xeerka Xayiraadda Lacagaha